PCB Material - Pandawill Technology Co., Ltd.
Pandawill PCB dia faly manolotra ireo karazana laminate sy substrate manara-penitra sy manam-pahaizana manokana mifanaraka amin'ny zavatra takiana amin'ny fampiharana manokana.
Ireto fitaovana ireto dia misy ireto sokajy manaraka ireto:
> FR4 (naoty mahazatra hatramin'ny Tg ambony)
> PTFE (Rogers, Arlon ary fitaovana mitovy amin'izany)
> Fitaovana ceramic
> Fitaovana mora azo (polyimide)
Mifantoka hatrany amin'ny vidiny sy kalitao tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika izahay, manoro hevitra izahay matetika mba tsy hampiasa ireo mpanamboatra fitaovana toa an'i Isola sy Rogers raha tsy hoe voafaritra mazava tsara ho toy ny fepetra takiana amin'ny fankatoavana izany. Ny antony dia lafo be izy ireo ary matetika miaraka amin'ny MOQ ary mila fotoana lava hanafarana ireo fitaovana.
Pandawill dia manolotra karazana substrate FR4 izay mameno ny spektrum Tg feno araka ny angatahina, ary matetika ny departemantan'ny injenieran'ny CAM dia hanome soso-kevitra avo lenta ho an'ny fampiasana amin'ny fampiharana sarotra na HDI hialana amin'ny olan'ny sosona anatiny mandritra ny fizotran'ny fivorian'ny hafanana.
Pandawill dia manome laminate varahina isan-karazany mba hanomezana fahafaham-po ny fampiharana PCB avo lenta ary miasa manokana izahay amin'ny famatsiana substrate aluminium ho ampiasaina amin'ny fampiharana jiro LED izay PCB dia fitaovana fanaparitahana hafanana mavitrika ao anatin'ny famolavolana fivoriambe.
Ho an'ny fitaovana marefo sy malefaka, dia manolotra fitsipika feno momba ny famolavolana sy ny làlan'ny famokarana izahay mba hahatratrarana ny vokatra tsara indrindra ho an'ny rindranasao.